Elon Musk ဆီ မှ ဘဝသင်ခန်းစာများ – Gentleman Magazine
Elon Musk ဆီကနေ လူတိုင်းလေ့လာနိုင်တဲ့ ဘဝသင်ခန်းစာများ
ဘီလျံနာ Elon Musk ဟာ တော်လှန်ပြောင်းလဲနေတဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ အတူ Real Life Iron Man လို့တောင် တင်စားခံရသူပါ။ သူက သူ့ရဲ့ ချမ်းသာမှုနဲ့လဲ အကောင်းဆုံး ဇိမ်ခံတတ်ပါသေးတယ်။ အခု သင် ရာစုနှစ်ရဲ့ အကြီးမားဆုံး အောင်မြင်သူတစ်ယောက်ဆီကနေ ဘဝသင်ခန်းစာတွေ လေ့လာရတော့မှာပါ။ Musk ရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေဟာ သူ့ရဲ့ ရဲရင့်တဲ့ စွန့်ဦးလုပ်ငန်းသစ်တွေကနေ ရရှိခဲ့တာပါ။ သူ့ရဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ စီးပွားရေးအတွေ့အကြုံတွေက ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ကိုလဲ ပြောင်းလဲဖို့ တွန်းအားပေးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် သူ့ရဲ့ ဘဝသင်ခန်းစာတွေကို လေ့လာလိုက်ကြပါစို့။
၁. တခြားသူတွေ မသွားချင်တဲ့နေရာကို သွားဖို့ကြိုးစားပါ အိပ်မက်ဆန်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ တီထွင်ပြောင်းလဲဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် တခြားသူတွေနဲ့ ကွဲပြားခြားနားရဲရပါမယ်။ Musk နဲ့ သူ့ရဲ့ SpaceX ကုမ္ပဏီက Mars ပေါ်ကို နယ်မြေချဲ့ထွင်ဖို့ကို အတည်ပေါက်ကြီး ပြောနေတာပါ။ သူ့ရဲ့ တစ်သက်လုံး ကြိုးစားလာခဲ့တာက အင်္ဂါဂြိုလ်ပေါ် ရောက်ဖို့ပါပဲ တဲ့။
၂. သင့်ရဲ့ ငွေကြေးလစ်မစ်တွေကို စမ်းသပ်ကြည့်ပါ အခက်အခဲဆိုတာ ကြုံဖူးပါသလား? Musk ၁၇ နှစ်သားကလုပ်သလို ၁ ဒေါ်လာနဲ့ တစ်ရက်လုံး နေကြည့်ပါ။ သူဟာ ချိုးခြံနိုင်သလောက် ချိုးခြံပြီး နေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကို လိုအပ်လို့ လုပ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူလိုချင်တဲ့ ဘဝကို ရဖို့ သူကြိုးစားချွေတာကြည့်တာပါ။ အဲဒါက အကျိုးရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ ပြောစရာမလိုပါဘူး။
၃. ကိုယ့်ဘာသာ တိုးတက်အောင် ကြိုးစားပါ လူတော်တော်များများဟာ ကျရှုံးသွားရင် ဆက်မလုပ်ချင်တော့ပါဘူး။ အလေးမအားကစားသမားတွေတောင် တစ်နေ့တစ်နေ့ လေ့ကျင့်ရင်း မနိုင်တဲ့ဝိတ် အများကြီးရောက်သွားနိုင်ရင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တဲ့ သင်လဲ ဘာလို့ မလုပ်နိုင်ရမှာလဲ။ သင့်ကိုယ်သင် ဘယ်လို ပိုကောင်းအောင် လုပ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ ပြန်ပြန်မေးပါ။
၄. ထွက်ပေါက်တစ်ခု အမြဲထားပါ အကောင်းတွေဆိုတာ အမြဲမလာပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ထွက်ပေါက်တစ်ခု ထားရမှာပါ။ Musk အသက် ၂၈ နှစ်မှာ Zip2 လို့ခေါ်တဲ့ လမ်းညွှန်ကုမ္ပဏီတစ်ခု တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ လုပ်ငန်းအနာဂါတ်ကို သိနေတော့ ရောင်းဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ သတင်းစာကြီးနှစ်စောင်မှာ စာချုပ်ချုပ်လိုက်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ အဲဒိစာချုပ်တွေကို Compaq က ဒေါ်လာ ၃၀၇ သန်းနဲ့ ဝယ်သွားပါတယ်။ သင်ခန်းစာကတော့ ပရောဂျက်တစ်ခုကို အဆုံးသတ်သင့်တဲ့အချိန်မှာ အဆုံးသတ်လိုက်ပါ။ အတိတ်ကအောင်မြင်မှုတွေအတွက် ဖက်တွယ်မထားပါနဲ့။
Steve Jobs ဆီက ဘာတွေအတုယူမလဲ ? ‪
၅. ပုံမှန်မဟုတ်တာ လုပ်ပါ စွန်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်တွေကို ထင်ရှားလာစေတာက သူတို့ရဲ့ တော်လှန်တာပါပဲ။ Musk ရဲ့ ကုမ္ပဏီ Tesla က လျှပ်စစ်ကားတွေ ထုတ်နေပါတယ်။ အဲဒါက နှစ်ပေါင်းများစွာ အရိုးစွဲနေတဲ့ ကားဈေးကွက်ကို ပြောင်းလဲလိုက်တာပါပဲ။
၆. သေဖို့ အရမ်းနီးကပ်နေရင်တောင် စိတ်မလျှော့ပါနဲ့ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှာ Musk တောင်အာဖရိကကို အသွားမှာ ငှက်ဖျား စွဲကပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၄၅ ပေါင် ကျသွားပြီး သေလုနီးနီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ကိုမလျှော့ပဲ သူ့ရဲ့ ပန်းတိုင်တွေကို ပိုပြီးမြန်မြန်ပြီးအောင် လုပ်ရမယ် ပြောပါတယ်။ ပြီးတော့ ခြောက်လအကြာမှာ Space X ကို တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။
၇. တော်သူတွေကိုပဲ အနားခေါ်ထားပါ သင်ဟာ သင့်ကိုဝန်းရံနေသူတွေ တော်သလောက်ပဲ တော်တာပါ။ ကမ္ဘာ့အတော်ဆုံးတွေတောင် အဲဒိလိုပါပဲ။ သင့်ရဲ့ လူမှူဆက်ဆံရေး စကေးတွေကို မြှင့်တင်လိုက်ပါ။
၈. ဘယ်တော့မှ အရှုံးကို ပိုမတွက်ပါနဲ့ လူတွေဟာ ရှုံးမှာကြောက်တတ်ကြပါတယ်။ ရှုံးဖို့ အခြေအနေ သိပ်မရှိရင် အရမ်းမကြောက်ပါနဲ့။ ခုခေတ်ကမ္ဘာကြီးမှာ စွန့်စားသူတွေအတွက် အခွင့်အရေးတွေ အများကြီးပါ။
၉. သင့်ရည်မှန်းချက်ကို သင်ထိန်းထားပါ အဖြေတွေကို အရမ်းမကြည့်ပါနဲ့။ သင့်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဂရုပြုကြည့်ပြီး ထိန်းထားပါ။ အဲဒါကပဲ သင့်ကို သင့်ရည်မှန်းချက်ကို အရောက်ပို့ပေးနိုင်မှာ မို့ပါ။
၁၀. သင့်မာနက အောင်မြင်မှုကို ဖုံးလွှမ်းမသွားပါစေနဲ့ ဘယ်အချိန်မှာ အိုင်ဒီယာတစ်ခုအတွက် တိုက်ခိုက်ရမလဲ၊ ဘယ်ချိန်မှာ နောက်ဆုတ်ရမလဲ သိဖို့ဟာ အရေးကြီးပါတယ်။ Musk ဟာ X.com နဲ့ Paypal မှာ ရင်းနှီးထားပါတယ်။ Paypal ရဲ့အနာဂါတ်ကို ကြိုမြင်တော့ X.com က ရှယ်ယာအများကြီးကို Paypal Member ဖြစ်ဖို့ စွန့်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။
၁၁. သင့်ကို တွန်းအားပေးတဲ့အရာကို သိနေပါ ပိုက်ဆံလား၊ မိန်းမလား၊ အောင်မြင်မှုလား၊ ဘာက သင့်ကို တွန်းအားပေးနေပါသလဲ။ သိရှိထားပြီး အဲဒါကို မြေတောင်မြှောက်ပေးပါ။
၁၂. လိုက်လျောညီထွေ ရှိပါ ရှင်သန်ဖို့ဆိုတာ လိုက်လျောညီထွေ နေတတ်တာပါပဲ။ Musk ဟာ X.com ကို Paypal အသွင်ပြောင်းခဲ့တယ်။ပြီးတော့ Paypal ကို ကြီးထွားအောင် လုပ်ခဲ့ပြီး eBay ကို ရောင်းခဲ့ပါတယ်။
၁၃. လှုဒါန်းပါ Musk ဟာ သူ့ပိုင်ဆိုင်မှု အားလုံးကို Warren Buffett ရဲ့ အစီအစဉ်ကနေ လှူဒါန်မယ်လို့ စဉ်းစားပြီးပါပြီ။ Tesla ရဲ့ နည်းပညာမူပိုင်ခွင့်တွေကိုလဲ အားလုံးယူသုံးလို့ရပါတယ်။ အကြောင်းပြချက်ကတော့ သူ့ဝင်ငွေထက် လျှပ်စစ်ကားတွေ များလာဖို့က ပိုအရေးကြီးလို့ပါပဲ။
၁၄. ရည်မှန်းထားပါ အောင်မြင်မှူအတွက် လှေခါးဟာ အမြင့်ကြီးပါ။ ပထမထစ်ကတော့ အဲဒါကို သင် လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ သိဖို့ပါ။ ကျန်တာတွေ သူ့ဘာသာ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ Tesla ဟာသူ့ရဲ့ ပထမဆုံးအမြတ်ငွေကို ၂၀၂၀ မှာ စတင်ရနိုင်ဖို့ မျှော်မှန်းထားပါတယ်။ ဒါဆို Musk ကို ဘာက တွန်းအားပေးနေတာလဲ? သူ့ရည်မှန်းချက်ပါပဲ။
GM ရဲ့ တခြား ထင်ပေါ်ကြော်ကြားသော သူများနှင့် ပက်သက်သော
ဆောင်းပါးများကို ဖတ်ချင်ရင် http://mmgentleman.com/category/people/ မှာအလွယ်တကူ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Elon Musk ဆီကနေ လူတိုငျးလလေ့ာနိုငျတဲ့ ဘဝသငျခနျးစာမြား
ဘီလြံနာ Elon Musk ဟာ တျောလှနျပွောငျးလဲနတေဲ့ စကျမှုလုပျငနျးတှနေဲ့ အတူ Real Life Iron Man လို့တောငျ တငျစားခံရသူပါ။ သူက သူ့ရဲ့ ခမျြးသာမှုနဲ့လဲ အကောငျးဆုံး ဇိမျခံတတျပါသေးတယျ။ အခု သငျ ရာစုနှဈရဲ့ အကွီးမားဆုံး အောငျမွငျသူတဈယောကျဆီကနေ ဘဝသငျခနျးစာတှေ လလေ့ာရတော့မှာပါ။ Musk ရဲ့ အောငျမွငျမှုတှဟော သူ့ရဲ့ ရဲရငျ့တဲ့ စှနျ့ဦးလုပျငနျးသဈတှကေနေ ရရှိခဲ့တာပါ။ သူ့ရဲ့ ဦးနှောကျနဲ့ စီးပှားရေးအတှအေ့ကွုံတှကေ ကမ်ဘာကွီးကို ပွောငျးလဲပဈနိုငျပါတယျ။ သငျ့ကိုလဲ ပွောငျးလဲဖို့ တှနျးအားပေးနိုငျပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ သူ့ရဲ့ ဘဝသငျခနျးစာတှကေို လလေ့ာလိုကျကွပါစို့။
၁. တခွားသူတှေ မသှားခငျြတဲ့နရောကို သှားဖို့ကွိုးစားပါ အိပျမကျဆနျတာပဲ ဖွဈဖွဈ၊ တီထှငျပွောငျးလဲဖို့ပဲ ဖွဈဖွဈ တခွားသူတှနေဲ့ ကှဲပွားခွားနားရဲရပါမယျ။ Musk နဲ့ သူ့ရဲ့ SpaceX ကုမ်ပဏီက Mars ပျေါကို နယျမွခြေဲ့ထှငျဖို့ကို အတညျပေါကျကွီး ပွောနတောပါ။ သူ့ရဲ့ တဈသကျလုံး ကွိုးစားလာခဲ့တာက အင်ျဂါဂွိုလျပျေါ ရောကျဖို့ပါပဲ တဲ့။
၂. သငျ့ရဲ့ ငှကွေေးလဈမဈတှကေို စမျးသပျကွညျ့ပါ အခကျအခဲဆိုတာ ကွုံဖူးပါသလား? Musk ၁၇ နှဈသားကလုပျသလို ၁ ဒျေါလာနဲ့ တဈရကျလုံး နကွေညျ့ပါ။ သူဟာ ခြိုးခွံနိုငျသလောကျ ခြိုးခွံပွီး နခေဲ့ပါတယျ။ အဲဒါကို လိုအပျလို့ လုပျနတော မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သူလိုခငျြတဲ့ ဘဝကို ရဖို့ သူကွိုးစားခြှတောကွညျ့တာပါ။ အဲဒါက အကြိုးရှိခဲ့တယျဆိုတာ ပွောစရာမလိုပါဘူး။
၃. ကိုယျ့ဘာသာ တိုးတကျအောငျ ကွိုးစားပါ လူတျောတျောမြားမြားဟာ ကရြှုံးသှားရငျ ဆကျမလုပျခငျြတော့ပါဘူး။ အလေးမအားကစားသမားတှတေောငျ တဈနတေ့ဈနေ့ လကေ့ငျြ့ရငျး မနိုငျတဲ့ဝိတျ အမြားကွီးရောကျသှားနိုငျရငျ စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျဖွဈတဲ့ သငျလဲ ဘာလို့ မလုပျနိုငျရမှာလဲ။ သငျ့ကိုယျသငျ ဘယျလို ပိုကောငျးအောငျ လုပျနိုငျမလဲဆိုတဲ့ မေးခှနျးတှေ ပွနျပွနျမေးပါ။
၄. ထှကျပေါကျတဈခု အမွဲထားပါ အကောငျးတှဆေိုတာ အမွဲမလာပါဘူး။ အဲဒါကွောငျ့ ထှကျပေါကျတဈခု ထားရမှာပါ။ Musk အသကျ ၂၈ နှဈမှာ Zip2 လို့ချေါတဲ့ လမျးညှနျကုမ်ပဏီတဈခု တညျထောငျခဲ့ပါတယျ။ လုပျငနျးအနာဂါတျကို သိနတေော့ ရောငျးဖို့ရညျရှယျခကျြနဲ့ သတငျးစာကွီးနှဈစောငျမှာ စာခြုပျခြုပျလိုကျပါတယျ။ နောကျပိုငျးမှာ အဲဒိစာခြုပျတှကေို Compaq က ဒျေါလာ ၃၀၇ သနျးနဲ့ ဝယျသှားပါတယျ။ သငျခနျးစာကတော့ ပရောဂကျြတဈခုကို အဆုံးသတျသငျ့တဲ့အခြိနျမှာ အဆုံးသတျလိုကျပါ။ အတိတျကအောငျမွငျမှုတှအေတှကျ ဖကျတှယျမထားပါနဲ့။
Steve Jobs ဆီက ဘာတှအေတုယူမလဲ ? ‪
၅. ပုံမှနျမဟုတျတာ လုပျပါ စှနျဦးတီထှငျ လုပျငနျးရှငျတှကေို ထငျရှားလာစတောက သူတို့ရဲ့ တျောလှနျတာပါပဲ။ Musk ရဲ့ ကုမ်ပဏီ Tesla က လြှပျစဈကားတှေ ထုတျနပေါတယျ။ အဲဒါက နှဈပေါငျးမြားစှာ အရိုးစှဲနတေဲ့ ကားဈေးကှကျကို ပွောငျးလဲလိုကျတာပါပဲ။
၆. သဖေို့ အရမျးနီးကပျနရေငျတောငျ စိတျမလြှော့ပါနဲ့ ၂၀၀၀ ပွညျ့နှဈမှာ Musk တောငျအာဖရိကကို အသှားမှာ ငှကျဖြား စှဲကပျခဲ့ပါတယျ။ ၄၅ ပေါငျ ကသြှားပွီး သလေုနီးနီးဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ စိတျကိုမလြှော့ပဲ သူ့ရဲ့ ပနျးတိုငျတှကေို ပိုပွီးမွနျမွနျပွီးအောငျ လုပျရမယျ ပွောပါတယျ။ ပွီးတော့ ခွောကျလအကွာမှာ Space X ကို တညျထောငျခဲ့ပါတယျ။
၇. တျောသူတှကေိုပဲ အနားချေါထားပါ သငျဟာ သငျ့ကိုဝနျးရံနသေူတှေ တျောသလောကျပဲ တျောတာပါ။ ကမ်ဘာ့အတျောဆုံးတှတေောငျ အဲဒိလိုပါပဲ။ သငျ့ရဲ့ လူမှူဆကျဆံရေး စကေးတှကေို မွှငျ့တငျလိုကျပါ။
၈. ဘယျတော့မှ အရှုံးကို ပိုမတှကျပါနဲ့ လူတှဟော ရှုံးမှာကွောကျတတျကွပါတယျ။ ရှုံးဖို့ အခွအေနေ သိပျမရှိရငျ အရမျးမကွောကျပါနဲ့။ ခုခတျေကမ်ဘာကွီးမှာ စှနျ့စားသူတှအေတှကျ အခှငျ့အရေးတှေ အမြားကွီးပါ။
၉. သငျ့ရညျမှနျးခကျြကို သငျထိနျးထားပါ အဖွတှေကေို အရမျးမကွညျ့ပါနဲ့။ သငျ့ရဲ့ လုပျဆောငျခကျြကို ဂရုပွုကွညျ့ပွီး ထိနျးထားပါ။ အဲဒါကပဲ သငျ့ကို သငျ့ရညျမှနျးခကျြကို အရောကျပို့ပေးနိုငျမှာ မို့ပါ။
၁၀. သငျ့မာနက အောငျမွငျမှုကို ဖုံးလှမျးမသှားပါစနေဲ့ ဘယျအခြိနျမှာ အိုငျဒီယာတဈခုအတှကျ တိုကျခိုကျရမလဲ၊ ဘယျခြိနျမှာ နောကျဆုတျရမလဲ သိဖို့ဟာ အရေးကွီးပါတယျ။ Musk ဟာ X.com နဲ့ Paypal မှာ ရငျးနှီးထားပါတယျ။ Paypal ရဲ့အနာဂါတျကို ကွိုမွငျတော့ X.com က ရှယျယာအမြားကွီးကို Paypal Member ဖွဈဖို့ စှနျ့ပဈခဲ့ပါတယျ။
၁၁. သငျ့ကို တှနျးအားပေးတဲ့အရာကို သိနပေါ ပိုကျဆံလား၊ မိနျးမလား၊ အောငျမွငျမှုလား၊ ဘာက သငျ့ကို တှနျးအားပေးနပေါသလဲ။ သိရှိထားပွီး အဲဒါကို မွတေောငျမွှောကျပေးပါ။
၁၂. လိုကျလြောညီထှေ ရှိပါ ရှငျသနျဖို့ဆိုတာ လိုကျလြောညီထှေ နတေတျတာပါပဲ။ Musk ဟာ X.com ကို Paypal အသှငျပွောငျးခဲ့တယျ။ပွီးတော့ Paypal ကို ကွီးထှားအောငျ လုပျခဲ့ပွီး eBay ကို ရောငျးခဲ့ပါတယျ။
၁၃. လှုဒါနျးပါ Musk ဟာ သူ့ပိုငျဆိုငျမှု အားလုံးကို Warren Buffett ရဲ့ အစီအစဉျကနေ လှူဒါနျမယျလို့ စဉျးစားပွီးပါပွီ။ Tesla ရဲ့ နညျးပညာမူပိုငျခှငျ့တှကေိုလဲ အားလုံးယူသုံးလို့ရပါတယျ။ အကွောငျးပွခကျြကတော့ သူ့ဝငျငှထေကျ လြှပျစဈကားတှေ မြားလာဖို့က ပိုအရေးကွီးလို့ပါပဲ။
၁၄. ရညျမှနျးထားပါ အောငျမွငျမှူအတှကျ လှခေါးဟာ အမွငျ့ကွီးပါ။ ပထမထဈကတော့ အဲဒါကို သငျ လုပျနိုငျတယျဆိုတာ သိဖို့ပါ။ ကနျြတာတှေ သူ့ဘာသာ ဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။ ဥပမာ Tesla ဟာသူ့ရဲ့ ပထမဆုံးအမွတျငှကေို ၂၀၂၀ မှာ စတငျရနိုငျဖို့ မြှော်မှနျးထားပါတယျ။ ဒါဆို Musk ကို ဘာက တှနျးအားပေးနတောလဲ? သူ့ရညျမှနျးခကျြပါပဲ။
GM ရဲ့ တခွား ထငျပျေါကွျောကွားသော သူမြားနှငျ့ ပကျသကျသော
ဆောငျးပါးမြားကို ဖတျခငျြရငျ http://mmgentleman.com/category/people/ မှာအလှယျတကူ ဝငျရောကျလလေ့ာနိုငျပါတယျ။
Previous: ရူပါလန်းဖို့ မနက်တိုင်းလုပ်ဆောင်ရမည့် အလေ့အကျင့်(၁၀)ခု
Next: ဘယ်မိန်းကလေးမဆို တမ်းတမ်းစွဲဖြစ်သွားစေနိုင်သည့် နည်းလမ်း(၈)ခု